लोग्नेस्वास्नीबीचको झगडा ः परिणाम भयानक – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
लोग्नेस्वास्नीबीचको झगडा ः परिणाम भयानक
२०७१ श्रावण १, बिहीबार ०४:२२ गते
भिडियो सुटिङका लागि क्यामरा झुन्ड्याएर हिँड्ने एक युवकले भरतपुर नगरपालिका इलाकाभित्र एउटा कोठा भाडामा लिए । नयाँ दुलही भित्र्याउनका लागि तिनले कोठा लिएका रहेछन्, केही दिनपछि थाहा भयो । कोठा भाडा बुझाएको करिब एक हप्तापछिको एक साँझ ती युवक एउटी युवतीसँग हाँस्दैहाँस्दै कोठाभित्र छिरे । युवक २२ वर्षजतिको र युवती १७ जस्तै लाग्ने । अन्तरजातीय हुन् भन्ने कुरा जोकसैले सजिलै थाहा पाउने । भन्दा लभ–म्यारिज तर विवाह भएको चिनाउने संकेत नाक, कान, सिउँदो कतै केही छैन । एउटा पलङ बन्दोबस्त गरेका रहेछन् । दुईवटा थाल, दुईवटा कचौरा, भात पकाउन एउटा डेक्ची र तरकारीका लागि कराई । भित्तामा ठड्याएको एउटा कुचो, पानीको एउटा बाल्टी, त्यसमाथि एउटा मग । दुई–चारवटा आलुका दाना, प्लास्टिकमा आधा किलोजति चामल, फाटेको गुन्द्री, पलङमाथि एउटा झूल, दुई जोडी चप्पल र एक जोर जुत्ता । पुरूष र महिला भनिने दुई शरीरलाई छाडेर यिनै सामानका साथ ती जोडी दुई–चार दिन गज्जबले रमाए । बिहान–बेलुकामात्रै होइन, शुरूशुरूमा तिनीहरु दिउँसो पनि हाँसे ।
सँगै बस्न थालेको करिब एक हप्तापछि युवतीले एक नयाँ युवक कोठामा ल्याइन् । मामाको ठेगान छैन, तर मामाको छोरा हो भनिन् । भोलिपल्ट नयाँ युवक, पर्सिपल्ट अर्को युवक कोठामा ल्याउने र साँझ–बिहान यताउता घुम्न थालिन् । नयाँ दुलाहा भइखाएका युवकलाई युवतीको व्यवहार मन परेन । सामान्य कुराकानीबाट शुरू भएको विवादका बीच युवकले युवतीले “रन्डी” भनिदिए । युवती रिसाएर युवकलाई झम्टिइन् । कुटाकुट भयो । गर्मीको मौसममा धापिएर कतैबाट आएका युवक बेहोस भएर दाँत बाँधे । मर्नचाहिँ कोही पनि मरेनन् ।
अर्का रक्सीप्रेमी उस्तै छन्, भरतपुरमा । मर्न तयार हुने तर रक्सी खान नछाड्ने एक युवककी श्रीमती श्रीमान्ले रक्सी खाएको पटक्कै मन नपराउने, त्यही निहुँमा श्रीमान्लाई अचाक्ली गाली गर्ने, श्रीमान् श्रीमतीको गालीले घायल नहुन्जेल सुनेर बस्ने, रिसको पारो तातेपछि लात्तो र मुक्कीले लगातार हिर्काउने । गाउँलेलाई निद्रा लाग्दा गतिलोसँग सुत्न नदिने । श्रीमान्–श्रीमती प्रायः जसो दैनिक झगडा गर्ने ।
तेश्रो नम्बरको उदाहरण गज्जबको छ । करिब ६ महिनाअघि चितवन जिल्ला अदालतमा एक जोडी श्रीमान्–श्रीमती सँगै बस्न राजी भएनन् र डिभोर्स भयो । प्रेमविवाह गर्न इच्छुक युवायुवती बिहेअघि आमाबाबुले विवाह गर्न अनुमति नदिँदा एकले अर्कोसँग विवाह गर्न नपाए झुन्डिएर मर्ने बताएका रहेछन् । झट्ट हेर्दा १६–१७ वर्षजतिकी देखिने युवती र त्यस्तै–त्यस्तै उमेर लाग्ने केटोको जिद्दीसँग हारेर अभिभावकहरुले बिहेका लागि अनुमति दिएका रहेछन् । बिहे भएको दुई–चार महिना यो जोडी ढुकुरको जोडीको तरिकाले रमायो । बिस्तारै–बिस्तारै मनमुटाव शुरू भयो । मनमुटाव बढ्दै गएर तनमुटावमा परिवर्तन भयो । एकले अर्कोलाई कुट्ने र चिथोर्ने गर्न लागे ।
खास निहुँ यस्तो थियो– युवा घर छाडेर कतै बाहिर जानेबित्तिकै युवती “तिमी कता गएको ? किन ढिलो आएको ? तिमीसँग छेउछाउमा कोको थिए ?” जस्ता प्रश्न सोध्थिन् । युवकको पनि तरिका उस्तै थियो । श्रीमती कतै बाहिर जानेबित्तिकै श्रीमान्को पारो तातिहाल्ने । कतै अर्को केटासँग गएको पो हो कि ? श्रीमान्को सोचाइ हुने र अर्कै केटीसँग पो गएको हो कि श्रीमतीको सोचाइ हुने अवस्था बन्यो । एउटाले अर्कालाई चित्त बुझाउन नसक्ने अवस्था भयो र अलग बस्ने निर्णय भयो ।
उदाहरण नम्बर चार अल्लि नरमाइलो लाग्ने खालको छ । भरतपुर वडा नम्बर ६ तिर पुरानो बसाइँ भएका एक युवकले एक युवतीसँग प्रेमविवाह गरे र गैँडाकोटतिर डेरा लिएर बसे । केही महिनापछि दाम कमाएर केही गर्ने मनसायले युवक दुबईतिर जाने भए । आफू एक्लै हुने, श्रीमान्सँग एक्लिएर बस्नै नसक्ने बताएर श्रीमतीले श्रीमान्लाई विदेश नजान अनुरोध गरिन् । श्रीमान्–श्रीमतीको सद्भाव र प्रेम देखेर नतमस्तक हुँदै “चाँडै आउँछु, केही कमाएर ल्याउँछु” भन्दै श्रीमतीलाई डेरामा आफन्तको जिम्मा लगाएर श्रीमान् विदेशियो । विदेशमा कमाएको पैसा श्रीमतीको नाममा श्रीमान्ले खुरूखुरू पठाउँथ्यो । टेलिफोनमा कुराकानी हुँदा श्रीमती सोध्थिन्– “तपाईं कहिले नेपाल आउनुहुन्छ, मेरो प्राण ?” “प्यारी, चिन्ता नमान, चाँडै आउँछु ।” श्रीमान्ले भन्थ्यो ।
दिनहरु बित्दै गए । विदेशबाट लोग्नेले हाडछाला घोटेर श्रीमतीको नाममा पैसा पठाउँदै गयो । नेपालमा बसेर श्रीमतीले पैसा पोको पार्दै गई । नेपालीहरुको ठूलो चाड दसैँ नजिक आयो । श्रीमान्ले भन्यो– “प्यारी, एक पटक नेपाल आएर फेरि फर्किनुपर्छ कि क्या हो, तिम्रो न्यास्रोले पनि खुबै सतायो ।” श्रीमतीले भनी– “यस्तो दसैँ त आइनै रहन्छ । आउँदा–जाँदा प्लेन भाडा खर्च हुन्छ । कमाएको जति फोकटमा खर्च हुन्छ । अर्को वर्ष आउँदा ठीक हुन्छ होला ।” “लौ त नि”, श्रीमान्को जवाफ थियो ।
युवक अर्को वर्ष नेपाल फर्कियो । श्रीमान्ले श्रीमतीको अनुहारमा खुशी देख्न चाहन्थ्यो, तर पाएन । विदेशबाट मलाई यो ल्याइदिनुपथ्र्यो, त्यो ल्याइदिनुपथ्र्यो भन्ने माग राखेर श्रीमती बटारिन थाली । श्रीमान्ले अर्को पटक विदेश जाँदा भनेजति सबै ल्याइदिने बचन दियो, तर श्रीमती रिसाउन छाडिन । श्रीमतीको कचकच बढ्दै गएपछि श्रीमान्लाई पनि रिस उठ्यो । विदेशमा तिमीले केके ग¥यौ, केके खायौ र लायौ, मैले देखिनँ भन्ने श्रीमतीको भनाइको जवाफ श्रीमान्ले “नेपालमा कोकोसँग हिँड्यौ, मैले पो कहाँ देखेँ र !” श्रीमान्को यति बचन सुनेपछि श्रीमती बोल्न छाडी । अँध्यारो मुख लाएर सँगै सुतेकी श्रीमती राति कुनबेला उठेर बेपत्ता भई, थाहा भएन । तीन दिनपछि अर्को पुरूषसँग मेलोमेसो मिलाएको थाहा भयो । श्रीमती स्वयंले डिभोर्स गर्न चाही । जिल्ला अदालत चितवनमा श्रीमतीले निवेदन दर्ता गरी र डिभोर्स भयो । ती युवकको श्रीमती पनि गयो, विदेशमा कमाएको धन पनि खेर गयो ।
श्रीमान् र श्रीमतीको बीचमा सामान्य विषयमा झगडा भएर बिछोड भएका एक–दुईवटा होइन, हजारौँहजार घटना छन् । अहिले पनि समाजमा श्रीमान्–श्रीमतीबीच सामान्य विषयबाट झगडा शुरू हुन्छ र परिणाम भयानक हुन्छ, भइरहेको छ । श्रीमान् श्रीमतीलाई काबुमा राख्न चाहन्छ, श्रीमती पनि श्रीमान्लाई आफ्नै मुट्ठीमा कैद गर्न चाहन्छिन् । समस्या यहीँनेर छ । डाक्टर विरामी जाँचेर पैसा कमाउँछ, इज्जत पनि कमाउँछ । किस्तामै भए पनि गाडी किनेर चढ्छ । भौतिक सुविधा टनाटन छ । दुनियाँले बाहिरबाट हेर्दा डाक्टरलाई निकै खुशी देख्छन्, तर वास्तविकता अनुमान गरेभन्दा निकै भिन्न छ । उसलाई उसकी श्रीमतीले मानसिक यातना दिइरहेकी छे । बिरामी जाँच्दा–जाँच्दा थकित श्रीमान् एक मिनेटमात्रै घर फर्किन ढिला हुनेबित्तिकै श्रीमती सातो बोलाउँछे । प्रत्येक पन्ध्र मिनेटको फरकमा मोबाइलमा घन्टी बजाउँछे । मोबाइल उठाउन ढिला हुनेबित्तिकै के हो, निको चाला छैन कि क्या हो ? डाक्टरले यस्तो बचन सुन्नुपर्छ । मानसिक दबाब झेलिरहेको त्यो डाक्टरले कसरी सुखमय जीवन बिताउन सक्छ ?
स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्यबीच पनि दह्रै थियो, झगडा । बाहिरबाट हेर्दा राजा वीरेन्द्र जति भलाद्मी थिए, तरूनीको मामलामा उनी अल्लि कमजोर पनि थिए । रक्सीप्रेमी त छँदै थिए । रानी धनप्रेमी, खासगरी हीराको गहनाप्रेमी थिइन् । यी दुईका बीचमा सम्बन्ध राम्रो थिएन । सर्वसाधारण नागरिकको जस्तो मुखैले भनाभन र कुटाकुट त गर्थेनन्, तर कुटाकुट र भनाभनको परिणामभन्दा निकै चर्को खालको मनमुटाव राजा र रानीबीच थियो । पुराना प्रधानमन्त्री र दरबारमा काम गरेकाहरु सबैलाई यो वास्तविकता थाहा छ । यतिबेला भूतपूर्व युवराज पारस थाइल्यान्डमा गाँजा काण्डमा समातिएका छन् । तिनको पनि श्रीमतीसँग झगडा छ । पारस गाँजा र रक्सीमा झुल्न चाहने, त्यसको विपरीत उनकी श्रीमती हिमानी भलाद्मी भएर समाजसेवा गर्न चाहने । श्रीमान्–श्रीमतीबीच सामान्य ठाकठुक त सबैको होला, तर किन भयानक परिणाम निस्किने तरिकाले नै झगडा हुन्छ ? समस्या समाधानका लागि सम्भावित जवाफ यी हुन सक्छन् ।
सबैभन्दा पहिला जान्नैपर्ने र बुझ्नैपर्ने विषय यो हो कि दुनियाँमा कसैको पनि विचार कसैसँग मिल्दैन । फरक विचारको एकले अर्कोलाई समर्थन गरेर मानिदिने मात्रै हो । नेपाली नागरिक समाजमा के देखिन्छ भने श्रीमान् श्रीमतीलाई आफ्नै विचारमा डो¥याउन चाहन्छ, श्रीमती आफ्नै विचारमा श्रीमान्लाई लतार्न चाहन्छे । समस्या यहीँनेर छ । विचारमा फरकपन हुन्छ र एकले अर्को विचारलाई सकेसम्म सम्मान गर्नुपर्छ, सकारात्मक सोच्नुपर्छ भन्ने ज्ञान नहुँदा आज एउटा परिवारमा घर, गाडी, सुन, पैसालगायत अनुमान गरेभन्दा ज्यादा भौतिक सुविधा भइकन न श्रीमान् सुखी र खुशी छ, न श्रीमती वा तिनका सन्तान ।
हरेक चीजको आयु हुन्छ । आयु समाप्त हुन्छ । जन्मिएका हरेक प्राणीको अन्त्य निश्चित छ । मान्छे जन्मिन्छ, हुर्किन्छ । आयु समाप्त भएपछि शरीर कुनै पनि कारणले अन्त्यमा माटैमा मिल्छ । आँखाले देखेजतिका सबै चीजबीजको एक दिन अन्त्य निश्चित छ । आफ्नो कर्तव्य र भूमिका के हो, त्यो थाहा पाउनुपर्छ र आफ्नो कर्तव्य पालना गर्न कहिल्यै चुक्नुहुँदैन भन्ने ज्ञान आजका श्रीमान्–श्रीमतीहरुले लिएनन् । ज्ञानको अभावमा नै श्रीमान्ले श्रीमतीलाई रक्सी खाएर कुट्यो । श्रीमतीलाई छुद्र बचन बोल्यो । श्रीमतीले श्रीमान्लाई सधैँभरि मुट्ठीमा बन्द गर्न चाहिन् । परिणाम देखा प¥यो– सबै चीज भएर पनि कहिल्यै सुख र आनन्दको अनुहारै हेर्न पाएनन् । त्यस कारण, निष्कर्ष यही हो– अहिले पनि समय पूरै बितिसकेको छैन । मानवजीवनको अस्थायी प्रकृति र भूमिकाबारे बुझ्न शुरू गरिहाल्नुपर्छ । होइन भने, श्रीमान्का कारण श्रीमती दुःखी र श्रीमतीका कारण श्रीमान् दुःखी । दुवैका कारण सम्पूर्ण परिवार दुःखी । सबै परिवार दुःखी हुनुको अर्थ सिंगो राष्ट्र नै दुःखी । अब हेरौँ, यो युगका श्रीमान्–श्रीमतीहरु जीवनको वास्तविकता महसुस गरी सुखमय जीवनका लागि एकले अर्कोलाई सम्मान र सद्भाव व्यक्त गर्छन् कि एकले अर्कोलाई जबर्जस्ती काबुमा राखिराख्ने प्रयास गर्छन् । स्वादिलो र रसिलो जीवन जिउँछन् कि झगडामा अलमलिएर भयानक परिणामको सामना गर्छन् ।